Vaovao - Fampitahana ny fanosorana marbra amin'ny savoka fanadiovana marbra
Fampitahana ny fanosorana marbra amin'ny fanadiovana marbra
Ny fikosoham-bary sy ny fikosoham-bary no fomba farany ho an'ny dingana teo aloha amin'ny fitsaboana kristaly fikarakarana vato na fanodinana takelaka hazavana. Iray amin'ireo dingana manan-danja indrindra amin'ny fikarakarana vato amin'izao fotoana izao, fa tsy toy ny fanadiovana marbra sy savoka an'ny orinasa mpanadio nentim-paharazana. Ny fahasamihafana dia:
Voalohany, ny fahasamihafana tena ilaina.
Ny fikosoham-bary vita amin'ny marbra dia fanoloana ny fanodinana vato kristaly na dingana ilaina amin'ny fanodinana vato. Ny tena foto-kevitra dia ny fampiasana ny tsindry mitoto sakana synthesized inorganic asidra, vy oxides sy ny zavatra hafa amin'ny fanerena ny mekanika fikosoham-bary kapila, hafainganam-pandeha ambony fitotoana hery, frictional hafanana, ny anjara asan'ny rano ao amin'ny somary malama marbra ambonin'ny ara-batana sy fiaraha-miasa amin'ny simika, ka ny etỳ ambonin'ny marbra dia mamorona sosona kristaly mamirapiratra vaovao. Ity sosona kristaly ity dia manana famirapiratana faran'izay mamirapiratra sy mazava. Mety hahatratra 90-100 degre ny valizy. Ity sosona kristaly ity dia sosona kristaly novaina amin'ny tampon'ny vato (1-2mm matevina). Crystal surface treatment polishing dia ny fanitarana ara-batana ny fikosoham-bary, izany hoe, fikosoham-bary ho vovoka na ampio vovo-drongony kely sy rano mifangaro ao amin'ny milina fikarakarana vato miaraka amin'ny pad fibre aorian'ny fitotoana amin'ny tany aorian'ny dingana. ny hazavana.
Ny fanadiovana marbra dia santatra amin'ny fanosorana savoka marbra, ny fanadiovana marbra fanadiovana savoka dia fepetra fiarovana amin'ny fanadiovana sy fikojakojana marbra malaza tamin'ny taona 80 sy ny fiandohan'ny taona 1990, dia very ny tsena sy ny maha-zava-dehibe ny fisiana. Ny maha-izy azy dia ny coating manify ny acrylic resin sy ny PE emulsion polymers izay voasarona eo amin'ny ambonin'ny vato vao vita rarivato (voaporitra takelaka), izay matetika antsoina hoe savoka rano na savoka gorodona. Avy eo aorian'ny hafainganam-pandeha avo, ambany-tsindry poloney milina amin'ny fibre pad friction eo amin'ny vato ambonin'ny, ka ny resin coating mamirapiratra kokoa dingana. Noho ny fanavaozana ny vokatra, ary taty aoriana ny firongatry ny mazava savoka manokana, savoka-maimaim-poana, sns, coating ity dia mitovy amin`ny hazo gorodona menaka varnish.
Ny fikosoham-bary sy ny fikosoham-bary alohan'ny fitsaboana amin'ny kristaly fikarakarana marbra dia dingan'ny fiaraha-miasa ara-batana sy simika eo amin'ny vato sy ny simika. Ny sosona krystaly amin'ny eny ambonin'ny vato dia mitambatra tanteraka amin'ny sosona ambany, ary tsy misy sosona fanalefahana.
Ny sosona savoka eo ambonin'ny savoka fanadiovana marbra dia sarimihetsika resin mipetaka amin'ny tampon'ny vato, izay tsy misy fanehoan-kevitra simika amin'ny vato ary voasarona ara-batana. Ity sosona sarimihetsika savoka ity dia azo tapahina amin'ny lapelina tokana amin'ny vato.
Faharoa, ny endriky ny fahasamihafana.
Ny fikosoham-bary vita amin'ny marbra dia santatra amin'ny fikarakarana vato, hazavana avo aorian'ny famolahana fitsaboana, mazava tsara, fanoherana, fanoherana stomp, tsy mora kikisana, no tena endriky ny fampiasana vato sy fanitarana ny lanjany.
Vato savoka taorian`ny ambany luxer, mazava dia tsy mazava, ary tena manjavozavo, tsy mitafy-mahatohitra, rano-mahatohitra, mora scratch, oxidation sy yellowing mahatonga ny maha-zava-dehibe ny vato sary nihena.
Fahatelo, fanitarana sy fampandehanana ny fahasamihafana.
Aorian'ny fikarakarana tsy tapaka ny sosona kristaly sy ny sosona kristaly aorian'ny famolahana ny vato mitoto vato (fantatra amin'ny anarana hoe fikarakarana kristaly ambonin'ny tany), dia tsy mihidy tanteraka ny mason'izy ireo, ny vato dia mbola afaka miaina ao anatiny sy ivelany, ny vato dia tsy mora ratra. Amin'izany fotoana izany dia misy fiantraikany amin'ny rano, anti-fouling.
Taorian'ny savoka marbra dia mihidy tanteraka ny mason'ny vato, tsy afaka mifoka rivotra ny vato ao anatiny sy ivelany, noho izany dia mora voan'ny fery ny vato.
Ny fikarakarana tsy tapaka ny sosona kristaly sy ny sosona krystaly aorian'ny famolahana vato fitotoana vato dia mora ny miasa, tsy mitaky mpanadio fanadiovana mba hanadiovana ny tany, mety ho mivantana fitotoana sakana amin'ny rano fikosoham-bary sy fanafody maina fitotoana. Azo anaovana sy ampinono amin’ny fotoana rehetra, azo atao ny fandidiana eo an-toerana. Tsy misy fifanoherana vaovao amin'ny lokon'ny vato.
Raha ampitahaina etsy ambony, dia afaka mahita ny marbra poloney manana tombony maro. Mba hahatonga ny vokatry ny fanosorana vato tsara dia ilaina ny mifidy fitaovana diamondra tsara.Fuzhou Bontai Diamond Tools Companymanana traikefa 30 taona mahery amin'ny famokarana, afaka manome anao fitaovana diamondra isan-karazany ho an'ny simenitra, terrazzo, granita, marbra ary vato fikosoham-bary sy fitaovana fanosihosena. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay, hamaly izahay ao anatin'ny 24 ora.